Ukuphupha ngemargarita Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Igama lesiLatini ledaisy linokuguqulelwa kwisiJamani njenge "lihlala lihle." Kwaye loo nto ifika entliziyweni yalo mbandela kakuhle. Ngenxa yokuba i-daisy ibonakaliswa yinto yokuba iqhakaza phantse unyaka wonke. Ichasana nokucheba ingca rhoqo kwaye iyaqhubeka nokwenza iintyatyambo ezintsha.
Kodwa iintyatyambo ezintle ezimhlophe nezimthubi ezimthubi azilungelanga kuphela izimbali ezintle okanye izithsaba zeentyatyambo. Zingatyiwa okanye zisetyenziswe njengeyeza lonyango. Umzekelo, iimargarita zisetyenziswa kwisaladi okanye isuphu, kwaye zinokufumaneka kwindawo yedizethi.
Njengeyeza lokunyanga, ezi ntyatyambo zilawulwa njengeti, phakathi kwezinye izinto. Kodwa unokwenza namafutha asetyenziselwa iingxaki zolusu kunye nokuphilisa amanxeba.
1 Uphawu lwephupha «iDaisy» - Ukutolikwa ngokubanzi.
2 Uphawu lwephupha «daisy» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «iDaisy» - Ukutolikwa kokomoya
Uphawu lwephupha «iDaisy» - Ukutolikwa ngokubanzi.
Ukutolikwa ngokubanzi kwamaphupha kubona kuma-daisy ubudlelwane obusondeleyo kunye nobuntwana bakhe. Kungenxa yoko le nto ebeka olu phawu luphupha njengomqondiso ubumsulwa nokucoceka. Inokufuzisela ukunyaniseka komphuphi kwimicimbi yothando.
Ukubona kweedayisi ezininzi ephupheni kunokubhekisa ku umzuzu wokonwabaapho izinto ezininzi ziya koyisa. Isipha esinama-daisy njengomfanekiso wephupha, kwelinye icala, zihlala zizisa iintlungu nosizi kunye nawo. Ukuba umntu ophuphayo ubeka isipha seentyatyambo kwivasi, kusenokwenzeka ukungavisisani kusapho.
Ukuba umntu oleleyo uselangeni kwithafa elinama-daisy aqhakazileyo kwaye uva ukucula kweentaka, ulonwabo, impilo kunye nempilo zinokuqhubeka ebomini bakhe. phu melela yiba liqabane lakho. Nangona kunjalo, ukuba ubona ii-daisies ephupheni lakho ngaphandle kwexesha elifanelekileyo, kuya kufuneka ulungiselele izothuso ezingathandekiyo eziza kuza kuwe kungekudala.
Ukuba ii-daisy zikhula ephupheni kwigadi yakho, iphupha kufuneka ngokubanzi liqwalasele ukulangazelela kwakho umntu omsulwa. uthando Ziyaboniswa.
Uphawu lwephupha «daisy» - ukutolikwa kwengqondo
Ngaphakathi kutoliko lwengqondo lwamaphupha, i-daisy ephupheni ikwasetyenziswa njengophawu lokulula. ubume bomntwana ijongiwe. Umntu ozikhuphile ephupheni akanyanzelekanga ukuba abenazo ezi zinto, kodwa uzalatha kubo.
Ngamanye amaxesha kunokubakho "i-daisy" emva kwesimboli yephupha. Ukuchasana fihla, ngakumbi ukuba ii-daisy ziye zahluthwa okanye zasikwa nge-prunun. Kule meko, umphuphi ufumana inqaku lokuba uyabacaphukisa abantu abalungileyo okanye abantu abanesidima esithile.
Ngengqondo yesimboli sephupha "iintyatyambo", ii-daisy zinokuchaphazela oko ngelixa ulele. ukuvuswa kwengqondo Yibani nephupha. Ukuvulwa kwentyatyambo yezityalo ezinjalo ephupheni kunokuchazwa ngale ndlela.
Nabani na onxibe i-wreath ye-daisies ezinweleni zakhe ephupheni lakhe anganqwenela enye el mundo yomlindo. Unión, ophawulwe ngaphezulu kwayo yonke ngentlonipho kunye nokusebenzisana okuhle.
Uphawu lwephupha «iDaisy» - Ukutolikwa kokomoya
Ngokokuhlalutya okungaphaya kwamaphupha, uphawu "daisy" lufuna olwabo ulele. ubunyulu yazi ngezinto zokomoya.